ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း
Posted by alinsett on Aug 10, 2016 in Drama, Essays.., My Dear Diary, Short Story | 20 comments
Thint Aye Yeik's Creation ဒါကတော့ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့
”အမှောင်ထုချင်း သတ်ပုတ်ရင်း နက်ရှိုင်းသည်ထက် ပိုနက်ရှိုင်းနေသည့်အချိန်”တွင် သူ. . . ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဝေးပြေးကားကြီးပေါ်မှ ဘုတ်ခနဲ ဆင်းလိုက်သည်နှင့် သူ့ကို လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်သမျှမှာ. . .
၁။ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲထိ စိမ့်အေးသွားစေသော လေထု
၂။ မနီးမဝေးရှိ ခွေးတစ်ကောင်၏ ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူသံ
၃။ စိမ်းရွှင်ရွှင် ရနံ့တစ်ခုခု
၄။ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အေးစက်စက်(သို့သော် မကြာခင် တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပျက်သွားတော့မလိုလို ခံစားရစေသော) ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ခြင်း . . . စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ သူ မမြင်နိုင်သောအရာမျာလည်း သူ့အနီးအနားပတ်ချာလည်တွင် ရှိနေပြီး သူ့အား စိမ်းစိမ်းကြီး စိုက်ကြည့်ကာ ကြိုလင့်နေလေသည်။
သူကတော့ ထွေထွေထူးထူး တွေးတောမိခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ မြို့ကလေး၏ ပူးနွေးအေးစက်သော မြေထုကို နင်းပြီး
သူ့ ခြေဦးတည်ရာသည်ကား. . .
အမှန်တော့ ဤတည်းခိုခန်းသည် မူလတုန်းက ကွင်းပြင်မြေကြီးသာ ဖြစ်သည်။
သို့သော် သာမန်ကွင်းပြင်မြေမဟုတ်။ ဤရပ်ရွာအတွင်းမှ နာမ်မဲ့ရုပ်ခန္ဓာအပုပ်အသိုးများကို မြှုပ်နှံသိမ်းဆည်းရာ နေရာဖြစ်ပြီး ဤမြေကွက်လပ်အား . . .
”သချိ င်္ုင်းကုန်း”ဟု လူတို့က
လျှာဖျားမှာ တံဆိပ်ကပ်ကာ ခေါ်ကြသည်။
လူသေကောင်အပုပ် အရိအရွဲမျာ မြှုပ်နှံသည်ဖြစ်စေ. . .အသီးအပွင့် ဝေဆာလာမည့်သစ်စေ့များ မြှုပ်နှံသည်ဖြစ်စေ မြေကြီးကတော့ မြေကြီးပီသစွာသာ ထာဝရ ဖြန့်ခင်း တည်ရှိပေးနေသည်။
မမြဲသော နိယာမအရ ဤရပ်ရွာတွင် လူဦးရေထူထပ်လာပြီး ခေတ်စနစ်တို့ ပြောင်းကုန်သည်။
လူသေများအတွက် နေရာသီးသန့်ပေးမည့်အစား ထိုနေရာကို အကျိုးရှိရာတစ်ခုခုအဖြစ် အသုံးချရတော့မည့်ခေတ်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီ။
လူသေကောင်များကို ထပ်မံ၍ မမြှုပ်ကြတော့။ အခြားတစ်နေရာမှာ မီးလှောင်တိုက်ကာ ပြာချသည့် စနစ်ကသာ လူသေကောင်များအတွက် ဆုလာဘ် ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။
ထို့နောက် သချိ င်္ုင်း မဟုတ်တော့သော
ထိုနေရာကို အပေါ်ယံ ကြည့်ကောင်းအောင် ရှင်းလင်းပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ပြောင်းလဲ အသုံးချလာရာ. .. .
နောက်ဆုံး . လက်ရှိဤကာလမှာတော့ . . . အထည်အဝါကြီးမဟုတ်သော်လည်း အတန်အသင့်ကောင်းမွန်သပ်ရပ်သော တည်းခိုခန်းတစ်ခု ဖြစ်နေပြီ။
သို့သော် ဤတည်းခိုခန်းသို့ ဝင်လာဖူးသမျှ ဧည့်သည်တိုင်း သွေးပျက်ခြောက်ခြားစရာတွေ ကြုံဖူးသည်။ တချို့ဆိုလျှင် သွေးရူးသွေးတန်း ထွက်ပြေးဖူးသည်။ တချို့ကတော့ စကားမေးပင် မရတော့ဘဲ သွပ်ချာလှိုက်လှဲ. . .
အကြောင်းသိသူများနှင့် သတင်းအနံ့ခံကောင်းသူများက ဤတည်းခိုခန်းကို ရှောင်ကြပြီး . . .
အကြောင်းမသိသူများနှင့် အကြောင်းသိလျက် သတ္တိကောင်းသူများကတော့ ဤတည်းခိုခန်းကို တည့်တည့် တိုးဝင်ကြသည်။
ဤထဲခိုခန်းအတွင်းမှ အရာတစ်ချို့ကတော့ ဝင်လာသမျှ လူများကို စိမ်းစိမ်းကျက်ကျက်မရွေး လက်ယက်ခေါ်ကာ ကြိုဆိုသည်။
ထို့နောက်. . .ထိုလက်ကြီးများဖြင့်ပင်. . .
ဟိုအရင် သချိ င်္ုင်းကုန်းလက်ထပ်ကတည်းက မကျွတ်မလွတ်သော သရဲအဖြစ် ရှိခဲ့သည်။
ဤတည်းခိုခန်းတွင်းမှ အခန်းနံပါတ်(9)သည် ဤသတ္တဝါ၏ အပိုင်စားနေရာ ဖြစ်သည်။
ဤနေရာကို . . . . . .
ကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာသူ မည်သူ့ကိုမဆို ခြောက်လှန့် မောင်းထုတ်ရမည်မှာ ဤသရဲ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာကို ကျူးကျော်သူသည် ငါ့ရန်သူ။
ငါ့ရန်သူကို ငါ မောင်းထုတ်မည်။ မှုန့်မှုန့်ညက်ညက် ချေကြည့်မည်။ မရလျှင် ရသလောက်အတိုင်းအတာဖြင့် တတ်စွမ်းသလောက် ခြောက်လှန့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့ ဤနေရာကို ရောက်လာသူသည် လိပ်ပြာလွင့်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ လိပ်ပြာ လွင့်လုမတတ်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်။
ဤသည်မှာ ဤသရဲ၏ လေးနက်ခိုင်ကျည်သော သံဓိဌာန်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ခက်သည်။ ခက်သည်မှ အတော့်အတော်ကို ခက်လှသည်။
ဤအခန်းထဲ ဝင် လာတည်းသူတွေထဲမှာ ဤသူသည် ခြောက်လှန့်ရ အခက်ခဲဆုံးလူ ဖြစ်သည်။
သရဲ စိတ်ညစ်သွားသည်။ ညနက်သည်နှင့် ဤလူ ဤအခန်းထဲ ဝင်လာကာ ကုတင်ပေါ် တုံးခနဲ ပစ်လှဲသည်။ သူ အိပ်မပျော်ခင်က ဤသရဲခမျာလည်း မှေးခနဲတစ်ချက် ငိုက်သွားသည်။ သရဲ ခြောက်ဖို့ သတိရ၍ ထ ခြောက်မည်ကြံတော့ လူက အိပ်နေလိုက်သည်မှာ အော်မကြား ခေါ်မကြား။
သရဲက ရေချိုးခန်း အိမ်သာ တံခါးရွက်များကို ဝုန်းခနဲဒိုင်းခနဲမည်အောင် လုပ်သည်။
လူက မနိုး။ သရဲက လူအနားသွားပြီး အပုပ်နံ့ပေးသည်။ လူက တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်။
အပုပ်နံ့နှင့် မရသောအခါ သရဲ၏ အော်ဂလီဆန်ဖွယ်ရာ မျက်နှာ အပုပ်အပွကြီးကို လူ မျက်နှာနားကို ကပ်ပြီး ဗြဲခနဲ ဖြဲခြောက်သည်။ မလန့်ရေးချ မလန့်။ ဘယ်လန့်မတုန်း။ အိပ်မောကျနေလိုက်သည်မှာ သေနေသလားထင်ရသည်။ သည်လောက်တောင် ဖြစ်လှတာ. . .ကိုင်းကွာာာာ ဆိုပြီး ခြေထောက်ကနေ ဆွဲချပစ်လိုက်သည်။ သရဲခမျာ အားသွန်ခွန်စိုက် ဆွဲချလိုက်ရသော်လည်း လူကတော့ ကုတင်အောက်သာ ရောက်သွားသည်. . . အအိပ်မပျက်။
သရဲ စိတ်ညစ်သွားလေပြီ။ စိတ်ညစ်ညစ်ဖြင့် လူနံဘေးမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး လူကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်ကြည့်နေမိတော့သည်။
တတ်သမျှ မှတ်သမျှနည်းတွေနဲ့ ခြောက်လှန့်နေပါသော်လည်း ခက်တာက ဤလူမှာ အအိပ်ကြီးလှသည်။ သူက ဘာလုပ်လုပ် နိုးပင်မနိုးသောအခါ ခြောက်သူမှာသာ မောလှသည်။
ဤသရဲ တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် ဤမျှ အအိပ်ပုပ်သောလူကို မမြင်ဖူးခဲ့ချေ။
ဘာတွေ ဘယ်လောက် အအိပ်ပျက်လာ၍များ ခြောက်သည့်သရဲ မောပန်းနွမ်းနယ်သည်အထိ မနိုးနိုင်ရပါသလဲ။
ဤညတော့ ဤသရဲ ဤအတွေးများ တွေးရင်းသာ စိတ်လက်ကုန်ခမ်း မောပန်းစွာ ထိုင်နေရပါတော့သည်။
ထိုစဉ်. . .
*ဒုန်း ဆိုသည့်အသံမှာ . . .
အိပ်ပျော်နေသော လူက အအိပ်ဆိုးစွာ ဘယ်ညာလှည့်ချလိုက်သဖြင့် ကုတင်တိုင်နှင့် လူ့ခြေထောက် တိုက်မိရာမှ ထွက်လာသံဖြစ်သည်။
*ဟဲ့ သောက်ပလုပ်တုတ် ဆိုသည့်အသံကတော့
တိတ်ဆိတ်သော ညတွင် မှောင်မည်းကြီးထဲ ထူးဆန်းသည့် လူတစ်ယောက်ဘေးတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်နေချိန်မှာပဲ
ရုတ်တရုက် ထွက်ပေါ်သံသည့် ဒုန်းခနဲအသံကြီးကြောင့် သရဲခမျာ လိပ်ပြာလွင့်မတတ် လန့်သွား၍ သောက်ပလုပ်တုတ် ဟု ထ အော်မိခြင်း ဖြစ်သည်။
”လူ၊ တည်းခိုခန်း၊ သရဲနှင့် ည”
ဤသရဲအတွက်တော့ . . .
ဤညသည်. . .သာမန် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ ညတစ်ည ဖြစ်သလို
သရဲဘဝဖြင့် နေလာသမျှကာလပတ်လုံးတွင် လိပ်ပြာလွင့်မတတ် လန့်ဖျပ်ကာ ထ ခုန်ခဲ့ရသည့် သာမန်ထက် ထူးသောညလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်။
ထိုအချိန်မှစပြီးသရဲခြောက်သောထိုအခန်းမှာ
ဇာတ် ပေါင်းသော်. . . .
ထိုသို့သာ ဖြစ်လေသတည်းးး . . .
အဲ့လူက အိပ်နေတာရော ဟုတ်ရဲ့လားအေ . . .
ပင်ပန်းလွန်းလို့ တကယ်ကြီး အိပ်ပျော်သွားတာလေ။
မိုးလင်းတော့မှ သရဲ သိပ်ခြောက်တဲ့အခန်းဆိုတဲ့အကြောင်း သူများတွေ ပြောလို့ ပြန်ကြားရတာ။
သရဲ လက်လန်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ဝတ္ထု လုပ် ထားတာ
အဲဒီ သရဲ ဆိုတာ အချစ်ကို တင်စားထားတာလားငငင်??
ကံနိမ့်တဲ့ အချိန်မှာ တွေ့တာတို့ဘာတို့..
ဒါပေမဲ့…. အချစ်က တံခါးလာခေါက်ချိန်(ဗြူးဗြဲ လာ ခြောက်ချိန်)မှာတောင်…
ကိုယ်က အိပ်လိုက်တာ…သိုး….နေလို့… အချစ်နဲ့လည်း မတွေ့လိုက်ရသေးဘူးတို့… ဘာတို့…
စိတ် ကျေနပ်ရင် ပြီးတာပဲ. . .
နင့်သရဲ ရှိတဲ့အခန်းကို ဖော်ရိန်နာတွေ ခေါ်ပြီး
အငှင်း အ ငှင်း ( ငခူပြုံး ပြုံး၍ သဘောကျ ရယ်သံ )
ဟိုစာသင်ကျောင်း မတော့ သရဲသောင်းကြမ်းလို့ သနတ်နဲ့တောင်
သဂျီးလေသံနဲ့ ထပ်ပြောရင် …
လုပ်တတ်ရင် မီလျံ ဘစ်ဇနက်ပဲ ဟေ့…
အငှင်း အ ငှင်း
လုပ်တတ်တဲ့ ဘိုခင်ညွန့်တို့အုပ်စုကတော့.. ခေါင်းလောင်းသရဲကို မဟာမြိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့လုပ်စားသွားတာ.. မီလီယံချီထောသွားပြီ…။
သရဲခြောက်တဲ့အခန်းကို နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားလား မစားလားတော့ သေချာမသိ။
ဟိုတရက်က ဦးဝိစာရလမ်းနားက House Of Memories ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အစားအသောက် ဆိုင်ကြီးကို ရောက်ခဲ့တာ။ နိုင်ငံခြားသားတွေမှ… မနည်းမနော… လာစားကြ…။
စားရုံတင်မဟုတ်… အဲ့ဆိုင် အဆောက်အဦးကြီးက ရှေးခေတ်ဒီဇိုင်းကြီးမို့… ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီးလိုလို..မို့… အဆောက်အဦးနောက်ခံနဲ့ အမှတ်တရပုံတွေ ရိုက်ကြတာ…
House of Memories က ကိုလိုနီလက်အောက်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လျို့ဝှက်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာ . . . အဲဒါကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးတယ် . . အထဲမှာလည်း အမှတ်တရတွေ ပြထားတယ် . . . အစားအသောက်ရော service ရော ကောင်းတယ်
အဲ… မသိခဲ့ဘူး။ သမိုင်းကို အဲ့လောက် လေ့လာထားတာသာကြည့်။
အစက သိရင်… ဓါတ်ပုံလေးတော့ တွဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်…။
.နောက်တစ်ခါ ကြုံရင်တော့ လာထား…
ကလောဟိုတယ် အဟောင်း အပေါ်ထပ်အခန်းမှာ ကိုယ်က အိပ်ချင်မူတူး တဖက်ခန်းက ရေချိုးလိုက် ရေဆွဲချလိုက် တခါးအဖွင့်ပိတ်တွေလုပ် တစ်ညလုံးမအိပ် သွားတောင်ပြောမလို့ မပြောဖြစ်လို့သာ မနက်ကျ ဘိတ်ဖတ်စားရင်း ၀ိတ်တာလေးကို ပြောမိ ပြုံးစိစိနဲ့ စိတ်တိုရသေး နောက်ညလဲဒီတိုင်း မနက်ကျ နောက်တယောက်ထပ်ပြောတော့မှ အဲ့ခန်းလူမရှိဘူးအန်တီတဲ့ နှစ်ရက်နေမှ သရဲခြောက်မှန်းသိ သရဲစိတ်ညစ်သွားလောက်တယ်…
ဟုတ်ပါ့…။ တချို့လူတွေကို သရဲတွေ လက်မြှောက်ထားရမှာပေါ့…
ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ကြုံဖူးတယ်။ ကုတင်ကလှုပ်သလိုလိုထင်နေတာ။ ဘေးက သူငယ်ချင်းကိုမေးတော့ သူမသိဘူးဖြေလို့ ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ နေ့လည်တရေးတမောအိပ်ပြီး နိုးလာတော့ သူငယ်ချင်းက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း က တံခါးလာခေါက်လို့ တံခါးဖွင့်ပေးတာ ကိုယ်တွေရဲ့အခန်းရှေ့က အခန်းမှာ မိန်းမတစ်ယောက် သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေတယ် ဆိုတဲ့ အိပ်မက်မက်တယ်တဲ့။ အပြင်မှာ တကယ်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းမရှိပါဘူး။ ညနေကျတော့ အပြင်ထွက် စားသောက်ပြီး ပြန်လာ တီဗီကြည့်ကြတာပေ့ါ။ ည (၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ ရေပန်းကနေ ရေကျသံတွေကြားရတယ်။ ကိုယ်က နားမကောင်းတော့ စိတ်ထင်တာနေမှာပါလေ ဆိုပြီး ထပ်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ ညကျတော့ သန်းခေါင်ကျော်ကြီး အခန်းထဲမှာ တခုခု ပြုတ်ကျသံကြားလို့ လန့်နိုးသွားတယ်။ အိပ်နေရင်း စားပွဲပေါ်က ပစ္စည်းတခုခုများ ကန်ချမိလားလို့ ထကြည့်တော့လည်း စားပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတွေက ဒီအတိုင်းသား။ ကြမ်းခင်းပေါ်မှာလည်း ဘာပစ္စည်းမှ ကျမနေဘူး။ ပြန်မအိပ်သေးဘဲ ဆက်စောင့်ကြည့်နေလိုက်သေးတယ်။ ဘာသံမှ မကြားရတော့လို့ ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အဲဒီဟိုတယ်က Check-Out ထွက်တော့မှ သူငယ်ချင်းကို မေးရတယ်။ ညက ရေပန်းကနေရေကျသံကြားမိလားဆိုပြီးမေးတော့ သူကကြားတယ်တဲ့။ နင်ကြောက်မှာစိုးလို့ မပြောတာတဲ့။ အဲဒီအထပ်မှာလည်း အခြားဧည့်သည်ဘယ်သူမှမရှိဘူးရယ်။
.မကြောက်တဲ့သူတွေ… ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့သူတွေ…
.ဘာမှန်းကို မသိလိုက်ပဲ မသိယောင်ဆောငနေတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ရင်… ခြောက်ရတဲ့ သရဲတွေ
သူရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီးထဲ ၀င်မိတာ ဆံပင်ဖားလားနဲ့ သရဲမကို နောက်ကျောခိုင်းကြီးတွေ့တယ်။။
သရဲ မမြင်ခင် အမြန်ပြန်ထွက်လာရတယ် ဆိုတဲ့ သူမျိုးဆိုရင်လဲ သရဲစိတ်ညစ်မယ်နော်
သရဲအကြောင်း တွေးလိုက်တိုင်း…. ပြေး သတိရတတ်တာက…
တရုပ်သရဲကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခန်း…
အဲ့မှာ သရဲတွေ လိုက်လို့ ပြေးနေရာကနေ မင်းသားက…မျက်နှာကို ပေါင်ဒါမှုန့်တွေ လိမ်းပြီး ပဝါတစ်စ ကောက်ခြုံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနောက်က လိုက်လာတဲ့ သရဲကို ဗြုန်းခနဲ လှည့်ပြီး
သရဲက သရဲယောင် ဆောင်ထားတဲ့လူကို လန့်သွားတာ…။
သရဲက အရမ်းလန့်သွားတဲ့ပုံနဲ့… သူ့ရင်ဘတ်အရှေ့မှာ လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ ယက်ခက်ပြီး..ကလူကလူတောင် လုပ်ယူနေရသေး။
အဲ့ဒါမျိုးတွေ ကြည့်ခဲ့တော့ သရဲလည်း မကြောက်တော့သလိုပဲ။
ပြီတော့…တစ်ခါမှလည်း သရဲအခြောက် မခံရဘူးဘူး။